Tim Cook: "Apple Music on Android waa bilow" | Wararka IPhone
Tim Cook: "Apple Music on Android waa bilow"
Markii ay Apple soo bandhigtay codsigeedii ugu horreeyay ee Dukaanka Play, si loo fududeeyo ka guuridda dadka isticmaala ee ka socda Android ilaa iOS, Faallooyinka abka ayaa si dhakhso leh loogu buuxiyay dib u eegisyo xun adeegsadayaasha aan xitaa isku dayin laakiin u dareemay sida laad caloosha bulshada Android ah. Hadda waxaa soo baxday in Google uusan haysan wax ka badan dhibcaha codsiyada ee App Store.
Dhowr bilood ka dib, wuxuu bilaabay codsigii ugu horreeyay ee gaar ah Isticmaalayaasha Android waxay ku raaxeysan karaan adeegyada AppleWaxaan ka hadlaynaa Apple Music, oo dhowaan la cusbooneysiiyay oo siinaysa dadka isticmaala Android ikhtiyaar ay ku soo dejisan karaan heesaha kaarka SD-ka qalabka.
Laakiin sida ku cad ereyada Tim Cook ayaa shalay ku hadlay wareysi, ragga ku saleysan Cupertino waxay damacsan yihiin inay keensadaan tiro badan oo codsiyo ah nidaamka hawlgalka ee la tartamaya, si ay iyaguna ugu raaxaystaan ​​dhammaan adeegyada ay hadda Apple siiso dadka isticmaala alaabteeda oo keliya. Sida laga soo xigtay bayaanadan, waxay u badan tahay in dadka isticmaala Android ay mar dhow awoodi doonaan inay ku isticmaalaan qalabkooda iCloud ama Apple Pay.
Way cadahay in shirkadaha ay ogaanayaan taas ku xaddidida adeegyadaada hal madal waxay la mid tahay inaad cagta isku toojiso. Adoo xaddidaya fursadaha ballaarinta, waxaad si weyn u xadideysaa koritaanka adeegga marka lagu daro dakhliga ay abuuri karto. Nasiib wanaag tan iyo markii uu Cook yimid booska agaasimaha guud ee shirkadda, fikradaha asaasiga ah ee shaqooyinka ku saabsan nidaamka deegaanka ee Android ayaa meel la iska dhigay, sidoo kale waxaa jira dhinacyo kale sida cabirka shaashadda qalabka.
Tusaalooyin cad oo shirkado u furmay nidaamyada kale ee deegaanka waxaan ka helnay Samsung, taas oo nasiib wanaag soo bandhigi doonta codsi loogu talagalay macruufka iyo Android wax yar si loogu oggolaado dadka isticmaala ee doonaya inay iibsadaan Gear S2 cusub, oo ay maamusho Tizen, inay sidaa sameeyaan iyadoon loo eegin nidaamka qalliinka loo adeegsaday, xitaa haddii ay leedahay xaddidaadkeeda.
Microsoft waa tusaale kale oo cad oo arrintan la xiriira. Muddooyinkii ugu dambeeyay Redmond waxay bilaabayaan tiro badan oo codsiyo ah oo loogu talagalay macruufka iyo Android mararka qaarkood si waxyeello loogu geysto barnaamijkooda Windows 10 Mobile, iyagoo isku dayaya inay helaan tiro badan oo adeegsadayaasha ah adeegyadooda halkii ay diiradda saari lahaayeen barnaamijkooda.
Xilliga adeegyada cusub la heli karo, Tim Cook ma uusan awoodin inuu ka jawaabo. Imaatinka Apple Pay ee Android waxay noqon doontaa dhiirigelin wanaagsan oo loogu talagalay barnaamijkan adduunka oo dhan ilaalinta ay siiso dadka isticmaala. Helitaanka keydinta iCloud waxay noqon kartaa wax lagu daray sidoo kale. Laakiin Apple miyuu ku dhiiran doonaa inuu soo saaro iMessage on Android si uu u noqdo codsi kale oo fariin ah? Iyo FaceTime? Waqtiga ayaa sheegi doona. Waxaan rajeyneynaa inaysan waqti dheer qaadan doonin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Android » Tim Cook: "Apple Music on Android waa bilow"
Waqtigan xaadirka ah dalabka aan jeclaan lahaa inaan ka arko Apple ee Android wuxuu noqonayaa FaceTime, marka la eego tayada fiidiyowga ee wicitaanka fiidiyowga ma la barbardhigi karo Hangouts ama Skype, kuwaas oo ah kuwa ugu caansan.
IOS 9 wuxuu xiraa iphone-ka dayactir hawleedyo aan rasmi ahayn
IPhone 5se miyuu noqon doonaa fashil sida iPhone 5c oo kale? [OPINES]